न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ आज बाँडफाँट हुँदै - टि. एल. एन पोस्ट
Home अर्थ न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ आज बाँडफाँट हुँदै
न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओ आज बुधवार बाँडफाँट हुँदैछ । कम्पनीले विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको नक्सालस्थित कार्यालयमा साझ ५ः३० बजे बाँडफाँट हुने बताएको छ । कम्पनीले भदौ १ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
कम्पनीले लमजुङ जिल्लाका आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई १५ लाख कित्ता र संस्थापक शेयरधनी कम्पनीका कर्मचारीलाई ३ लाख कित्ता आईपीओ विक्री खुला गरेको थियो । कम्पनीले सोही शेयर बाँडफाँट गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले अति प्रभावित क्षेत्र लमजुङ जिल्लाको मस्र्याङदी गाउँपालिका वडा न ३,६,७ र ८ का स्थानिय बासिन्दका लागि ५ लाख कित्ता र उक्त क्षेत्रबाहेक लमजुङ जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा बस्ने स्थानियलाई १० लाख कित्ता छुट्याएको थियो । उक्त आइपीओमा रू. ३८ करोड ६२ लाख ४४ हजार बराबरको आवेदन परेको छ ।
विक्री प्रबन्धकका अनुसार १५ हजार ३६८ जनाले ३८ लाख ६२ हजार ४४८ कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी न्यादीका संस्थापक शेयरधनीहरु बुटवल पावर कम्पनी र लमजुङ विद्युत विकास कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि ३ लाख कित्ता शेयर छुट्याएका थियो ।
कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर रेटिङ डबल बी इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस्तो रेटिङले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमता औषतमा जोखिम रहेको देखाउँछ । कम्पनीले लजमुङ जिल्लामा ३० मेगावट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
Previous article४ लाख नगदसहित १७ जना जुवाडे पक्राउ
Next articleछोरी पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले